Ukuphumelela Kwabafundi, Ngama-Numbers »Hodges University
Ukuphumelela Kwabafundi kanye Nezinkomba Zokusebenza Kwesikhungo
Impumelelo yabafundi ekufezeni izinhloso zomuntu siqu noma ezobuchwepheshe yiyona njongo ephambili yeHodges University. Iyunivesithi ilinganisa ukuphumelela kwabafundi nokusebenza kwezikhungo ngezindlela eziningana, kufaka phakathi amazinga okuqashwa kwabafundi / okuqashwa, ukukhiqizwa kweziqu, ukugcinwa kwabafundi nokuphikelela, amazinga okuphothula iziqu, nezinga lesikweletu sabafundi.
Amanani Wokugcinwa Kwabafundi Wonyaka
Izinga lokugcinwa minyaka yonke lichazwa njengephesenti labafundi abafuna iziqu ababhalise esikhathini sokuwa ababesabhalisiwe esikhathini esilandelayo sokuwa. Amanani wokugcinwa konyaka abalwa kokubili okokuqala eHodges nabo bonke abafundi ababhalisile. Amanani wokugcina abafundi be-bachelor anikezwe ngezansi. Inhloso ebekwe yiHodges University iyahluka ngokuya ngeqembu, ne-40% okokuqala eHodges kanye ne-60% yabo bonke abafundi ababhalisile.
Ithemu Lokuqala eHodges
I-Bachelor's 55% 52% 55% 55% 45% 50% 40% 45%
Bonke Abafundi Ababhalisile
I-Bachelor's 65% 63% 65% 69% 61% 63% 68% 63%
Amanani Wokuphikelela Ebusika Ekuphakameni Kwabafundi
Abafundi bavame ukubika ukuthi ikota yabo yokuqala ekolishi inzima kakhulu, ikakhulukazi kulabo ababuyela esikoleni ngemuva kokungayi emsebenzini isikhathi eside, abasebenza ngokugcwele, nabondla imindeni. IHodges University ifinyelela kubafundi ngezinsizakalo ezenzelwe ukubasiza ukuthi baphumelele - ikakhulukazi kulelo thuba elibucayi lokuqala.
I-Term Persistence Rate ichazwa njengephesenti labafundi abafuna iziqu ababhalise esikhathini sokuwa abasabhalise esikhathini esilandelayo sasebusika. Izinga lokuphikelela kwethemu libalwa okokuqala ngqa eHodges nabo bonke abafundi ababhalisile.
Ngezansi kunamazinga okuphikelela kwethemu-to-term kubo bonke abafundi abafuna iziqu; abantu abasha beqiniso (okokuqala ekolishi); kanye nezitshudeni ezingomakadebona, iqembu ngalinye lifinyelela noma leqe inani elihlosiwe laseHodges University ngama-50% okokuqala ngqa eHodges naku-70% kwelitshe labo bonke abafundi ababhalisile. Imininingwane ikhombisa ukuthi iningi labafundi liyaphumelela kwikota yabo yokuqala baphinde babhalise eHodges University ihlandla labo lesibili ekolishi.
ISIKHATHI SOKUQALA EHODGES COHORT
Abafundi Abafuna Iziqu 70% 71% 75% 70% 67% 71% 58% 60% 74%
Abasha abasha beqiniso 71% 74% 77% 61% 66% 72% 53% 51% 70%
BONKE ABAFUNDI ABABHALILE BABAMBISANE
Abafundi Abafuna Iziqu 75% 77% 76% 78% 75% 76% 76% 65% * 76%
Abafundi Abangomakadebona 73% 78% 72% 83% 78% 79% 84% 72% * 84%
* QAPHELA: Leli thuba laphazanyiswa ngenxa yokuvalwa kwezikole okwesikhashana komqedazwe weSARS-COV-2.
Amanani Okubekwa KukaJobe
Izibalo zangaphandle zisetshenziselwa ukuqinisekisa izibalo zokuqashwa kwangaphakathi. Umthombo wedatha osetshenzisiwe yiFlorida Education and Training Placement Information Program (FETPIP), eqoqa idatha ezikhungweni ezizimele zamaKholeji namaYunivesithi aseFlorida (ICUF). Emininingwaneni esanda kushicilelwa, iHodges University iphakeme kakhulu uma iqhathaniswa nontanga bayo be-ICUF, kanti abafundi baseHodges bahlala ezingeni eliphakeme kwabahlanu abahola imali ejwayelekile yonyaka yabafundi abaphothule iziqu ze-baccalaureate abaqashwe phakathi kuka-2011 no-2019. bathole iziqu ze-bachelor futhi abaqashiwe yi-65%.
INANI LABAQESHWA BESIFUNDA
AMAPHESENTI ABAQESHWA ABAQASHIWE AQASHWE
ISILINGANISO IMIHOLO YONYAKA YABO ABAQESHWA NGE-BACHELOR
ISIKHUNDLA SAKHE PHAKATHI KWABANGANE BAKHO
Ukukhiqizwa Kwezinga Ekuzuzeni Kwabafundi
Ngenxa yobunzima bokuqhathaniswa kwezinga lokuphothula iziqu ezikhungweni ezahlukahlukene, isilinganiso esisodwa sokuziphendulela esisebenzayo iHodges University isebenzisa ukukhombisa ukuphumelela kwabafundi ukukhiqiza ngezinga. Ukukhiqizwa kweziqu kuveza inani eliphelele lamadigri anikezwe ngonyaka wezifundo njengephesenti lokubhaliswa okulingana ngokugcwele (FTE) njengoba kubikiwe ku-Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS). Ngakho-ke, ukukhiqizwa kweziqu kukhombisa impumelelo yomfundi ngokuphelele, kunokuba kube yingxenye encane yomzimba wabafundi eyunivesithi, futhi kunikeze isilinganiso esifanele sokuphumelela ezikhungweni eziningi. Yize uHodges ehlangabezane nezinombolo zokubhaliswa eziphansi eminyakeni yamuva, itafula likhombisa impumelelo engaguquguquki ekukhiqizeni ngeziqu, ngama-degree angama-29 aklonyeliswe nge-100 FTE e-2019-2020, edlula okubekiwe kwamanje kwama-25 degrees nge-100 FTE.
(AMADEGI NGA-100 FTE)
Amanani wokuthweswa iziqu
Izinga lokuthweswa iziqu lishicilelwa yi-Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS) kuhulumeni wesifundazwe. Lawa mazinga amele iphesenti labafundi abafunda iziqu zesikhathi esigcwele, abafuna iziqu ze-undergraduate ababhalise okokuqala ekolishi (ama-freshmen eqiniso) abaphothula ngaphakathi kwe-150% yesikhathi esilindelekile sokuqeda iziqu zabo.
Iqoqo elisetshenziselwa ukubala amazinga wokuphothula iziqu e-IPEDS alimeleli ngokunembile abafundi baseHodges, ikakhulu abantu abadala abasebenza futhi basekele umndeni; ngakho-ke, bahlala befunda amatoho futhi sebenemali ethile yasekolishi. Ekwindla ngo-2020, isilinganiso seminyaka yabafundi bakaHodges sasineminyaka engama-33 kanti ama-34% abafundi abafuna iziqu bafunda isikhathi esithile.
Ngakho-ke, ngenhloso yokuhlinzeka ngemininingwane eqinisekisayo, uHodges ubala amazinga okuthweswa iziqu kwangaphakathi ngamaphesenti ayi-150 wesikhathi esijwayelekile sokuthweswa iziqu kwabafundi abenza iziqu eqenjini lokubhaliswa kokuwa abaya eHodges okokuqala ngqa. Amanani okuthweswa iziqu ngamaphesenti ayi-150 okokuqala ngqa eHodges undergraduate, abafundi abafuna iziqu banikezwa ngezansi. (Lokhu kumele ama-freshmen ayiqiniso ahlangene kanye namaqoqo adluliswayo.) Ngaphezu kwalokho, amazinga okuthweswa iziqu ngamaphesenti ayi-150 akhonjiswa iqembu labantu abadluliselayo, elimele ama-70% esikhathi sethu sokuqala eHohges cohort. Ngokuphambene nalokho, amazinga we-IPEDS jikelele wokuthweswa iziqu ahlinzekwa ukukhombisa isikhathi esigcwele, iqembu leqiniso lama-freshmen njengoba kubikwe ngokusemthethweni.
Ngokuya ngemininingwane yokuthambekela eyisisekelo kusuka ekwindla 2007 kuya ku-2014, inhloso yeHodges University yamazinga wokuphothula iziqu zangaphakathi ngamaphesenti ayi-150 wesikhathi esijwayelekile sokuphothula ngama-30%.
AMA-RATU WANGAPHAKATHI AMA-150%
Abafundi Abafuna Iziqu Ze-undergraduate Fall 2007 Fall 2008 Fall 2009 Fall 2010 Fall 2011 Fall 2012 Fall 2013 Fall 2014
Isikhathi sokuqala eHodges Cohort 40% 44% 30% 30% 30% 31% 27% 33%
Iqoqo lokudlulisa 51% 54% 36% 35% 35% 38% 33% 42%
Ama-IPEDS AMA-RATES ANGAPHELELE KU-150%
Amanani Wokuthweswa Iziqu Jikelele we-IPEDS 30% 29% 30% 25% 27% 22% 26% 28%
Isilinganiso Semiphumela ye-IPEDS Ekuzuzeni kwabafundi
Ukumela kangcono iHodges University, isilinganiso esisha semiphumela ye-IPEDS sisanda kukhethwa njengenkomba yethu yokuqedela ukhiye we-SACSCOC. Yize lesi silinganiso siqoqelwe iminyaka embalwa kuphela (esanda kwenzeka ngonyaka ka-2020-2021 weqembu lango-2012), ukuhlaziywa kwesimo senkomba okuyisisekelo kukhombisa ukuthi, ngokufakwa kwabafundi abadlulayo nabasebenza okwesikhashana, okuyikho okunembe kakhudlwana ithumba abantu abadala abasebenzayo ababuyela esikoleni, isilinganiso semiklomelo seminyaka eyisishiyagalombili siwela ngaphansi kwenhloso yethu engama-8%.
ISILINGANISO SOKUTHOLA UMPhumela (ISIKHATHI SOMKLOMELO WE-8-YEAR)
Abafundi Abafuna Iziqu Ze-undergraduate 2007 Iqoqo 2008 Iqoqo 2009 Iqoqo 2010 Iqoqo 2011 Iqoqo 2012 Iqoqo
Isikhathi esigcwele, Isikhathi sokuqala Ukungena 30% 29% 29% 23% 26% 26%
Amatoho, ukungena okokuqala ngqa 35% 22% 24% 34% 35% 27%
Isikhathi esigcwele, Ukungena okokuqala ngqa 56% 59% 44% 42% 42% 38%
Amatoho, Ukungenzi okokuqala ngqa 44% 35% 29% 31% 24% 32%
Isilinganiso Sesilinganiso Semiphumela Yonke 45.9% 45.6% 35.6% 32.5% 31.8% 30.8%